काठमाडौ, १८ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापु..
काठमाडौ, १८ साउन । सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३ को सहयोगमा अपाङ्गत..
दोलखामा पहिरो खस्दा १० घर पुरियो, दुई जना बेपत्ता
दोलखा,१८ साउन। गौरीशंकर गाउँपालिका–१ जुँगुमा शुक्रबार राति पहिरो खस्दा १० घर पुर..
काठमाडौँ, १८ साउन । ट्राफिक प्रहरीले लेन अनुशासन नमान्ने ४२ हजार ८२२ चालकलाई कार..
नख्खु कारागारमा झडप, एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं, १७ साउन । नख्खु कारागारमा आज (शुत्रबार) कैदी–बन्दीबीच झडप हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । शुक्रबार अपरान्ह १ बजेतिर कैदी–बन्दीबीच झडप हुँदा जेल जीवन बिताइरहेका पूर्णबहादुर राजीवको ज्यान गएको कारागार प्रशासनले जानकारी दिएको छ । ललितपुर प्रहरीका अनुसार जबरजस्ती करणी मुद्दाका दोषी पूर्णबहादुर राजीवमाथि ज्यान मुद्दाका कैदीबन..
काठमाडौँ, १७ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई आज मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा लिखित सुझाव पेश गर्न सङ्घलाई आग्रह गर्..
काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपाको एकता टुङ्ग्याउन दुबै अध्यक्षमा चाहना र संकल्पको कमी देखिएको बताएका छन् । नेता नेपालले दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकतालाई टुङ्गो लगाउने इच्छाशक्ति नदेखाउँदा पार्टी एकता प्रक्रिया प्र..
काठमाडौँ, १७ साउन । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि आगामी साउन १९ गतेदेखि दफावार छलफल हुुने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आइतबारदेखि दफावार छलफल शुुरु हुन लागेको हो । सरक..
मेलम्चीको पाइप सफा गर्ने क्रममा २ मजदुरको मृत्यु
काठमाडौं, १७ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बालाजुस्थित पाइपलाइन सफाइका क्रममा दुई कामदारको ज्यान गएको छ । सप्तरी कनकपट्टीका सहोदर दाजुभाइ २५ वर्षीय सुरेश साह र २० वर्षीय शिवकान्त साहको उपचारका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिएका छन् ।..
बाजुरा, १७ साउन । लगातारको भारी वर्षाका कारण बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–६ बसालाको शान्तिटोलमा पहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शान्तिटोलका एकैघरमा आमा र छोरी रहेका छन् । पहिरोमा परेर ३० वर्षीया आमा निरुता चदारा र छ वर्षीया छोरी किस्मिता चदाराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक उद..
काभ्रेपलाञ्चोक, १७ साउन । टिपरबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत पाँच प्रहरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक टोलीले प्रक्राउ गरेको छ । आयोगको टोलीले काभ्रेपलाञ्चोकस्थित अरनिको तथा हेलम्बू राजमार्गको विभिन्न पोष्टमा कार्यरत प्रहरीलाई टिपरसँग घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको हो । बिहीबार साँझसम्मको स्थलगत अन..
काठमाडौँ, १६ साउन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डामा होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपाका सांसद खीमलाल भट्टराईले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही महीनापछि रिक्त हुन लागेको उपकु..
काठमाडौँ, १६ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पदावधि सकिनै लाग्दा नयाँ उपकुलपति बन्न केही व्यक्तिले दौडधुप सुरु गरेका छन् । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सिध्याएर डा. तीर्थ खनियाँ आगामी भदौदेखि सेवानिवृत्त हुँदै छन् । खनियाँ नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् । डा. खनियाको अवधि सकिन केही समय बाँकी छँ..
काठमाडौँ, १६ साउन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही दिनदेखि जारी अवरोध हटाउने विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति नभएपछि आजको बैठक पनि स्थगन भएको छ । अवरोध हटाउने सम्बन्धमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सर्लाही घटनाका विषयमा संसदीय समिति गठन गर्ने..
रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण अन्योलमा
ललितपुर, १५ साउन । भूकम्प गएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि ललितपुरको प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । श्रीलङ्का सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन यो मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमा सकिएर थप भएको अवधिमा समेत ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै काम भएको छ । ठेकेदार कम्पनीबीचको आपसी विवादका कारण अहिल..
उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र दलबीच सहमति
काठमाडौँ, १६ साउन । निर्वाचन आयोग र मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच आगामी मंसिरमा रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न सहमति भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी अहिलेसम्म ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ । उपनिर्वाचनका बारेमा निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल बिहीबार गरेको छलफलमा दलहरुले आगामी मंसिरमा उपनिर..
काठमाडौँ, १६ साउन । यस वर्षको अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस साताव्यापीरुपमा मनाइने भएको छ । आगामी २७ गते मनाउन थालिएको दिवस युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्को संयुक्तरुपमा मनाइन थालिएको हो । यस वर्ष दिवसको अन्तरराष्ट्रिय नारा ‘शिक्षामा रुपान्तरण’ र नेपालको नारा ‘शिक्षामा रुपान्तरण ः उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन’ र..
दुई दर्जन एनसेल टावरमा विप्लब समूहको आगजनी
काठमाडौँ, १६ साउन । मुलुकका विभिन्न जिल्लामा रहेको झण्डै दुई दर्जन टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी (एनसेल) र नेपाल टेलिकमको टावरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लब समूहले आगजनी गरी क्षति पु¥याएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २२ वटा एनसेल टावर र एउटा नेपाल टेलिकमको टावरमा यसरी आगजनी भएको हो । बुधबार साँझदेखि आज बिहान ११ बज..
काठमाडौँ, १६ साउन । काखमा नवजात शिशु छ, स्तनपान गराइरहनुपर्छ । सेवा लिन स्थानीय सरकार ९गाउँपालिका÷नगरपालिका तथा प्रदेश० जानुपरेको छ । नजिकको सरकारको भवनमा स्तनपान मैत्री संरचना छैनन् । यो समस्याको अब अन्त्य भएको छ । पालिका तथा प्रदेश कार्यालयले अनिवार्य आफ्ना भवनमा स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले कार्यान्वयनम..
योगेश भट्टराई : सडक आन्दोलनदेखि सिंहदरबारसम्म
काठमाडौं, १५ साउन । नव नियुक्त सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययनमन्त्री योगेश भट्टराईले सपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार दिउँसो सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । भट्टराईले अपराहृन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । तत्कालीन पर्यट..
अध्यक्षद्वयले किन थाती राखे स्कुल विभाग ?
काठमाडौ,१५ साउन । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिपक्व गृहकार्य नगर्दा नेपाल कम्युनस्टि पार्टी ९नेकपा० मा पार्टी स्कुल विभागमा अनावश्यक लफडा परेको छ । ३३ मध्ये ३२ वटा विभागको मात्र भागबन्डा गरेर स्कुल विभाग थाँती राखेका अध्यक्षद्वयले सचिवालयकै नेताहरूबीच खेल्ने र जुधाउने काम गरेर केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यवि..
भक्तपुर, १५ साउन । सूर्यविनायक नगरपालिका–९ नंखेलमा निर्माण भएको ट्रस पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सांसद एवं पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको सो पुल उहाँकै पहलमा निर्माण गरिएको हो । सांसद बस्नेतले भक्तपुरका प्रत्येक दुर्गम क्षेत्रलाई अबका तीन वर्षभित्र सुगम बनाइने घोषणा गर्दै अरनिको राजमार्गबाट १५० मिटरभित्र रहेर ..
गरिबी र पछौटेपन बदल्ने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, १५ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीलाई विकासको कार्ययोजना सहित वार्षिक कार्ययोजना लिएर आउन निर्देशन दिनुभएको छ । बुधबार बिहान १० बजेदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजना पेस गरिरहनु भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्..